I-Kinect v2 Viewer ikuvumela ukuba usebenzise iMicrosoft Kinect nge-iPhone | IPhone iindaba
I-Kinect v2 Viewer ikuvumela ukuba usebenzise iMicrosoft Kinect nge-iPhone
UJingzhou Chen ngumphuhlisi oqale ukusebenza kwiprojekthi efuna ukuzisa Kinect umbukeli oshukumayo kwi-iOS isuka kwiApple. U-Kinect kaMicrosoft uqhume kwintengiso ngo-2010, ekhuthaza ukuthengisa kunye nokuphucula kakhulu i-Xbox yesibini. Ngoku ngale projekthi yobuqu unako zama ukonwaba kunye neKinect kunye ne-iPhone yakho.
I-Kinect izisa umlinganiso omtsha kunye nokungaqhelekanga kwimidlalo kunye nokuzonwabisa-amandla okudlala ngomzimba wonke. NgeKinect, itekhnoloji iyanyamalala, ivumela umlingo ngaphakathi kuthi ukhanye.
Le nkqubo ifuna ukuba uyifakile kwiWindows 8 yakho IKinect v2. Ukuze uyenze kufuneka khuphela ifayile uyivule kwaye uyisebenzise. Kubalulekile ukuba le seva ibe yiyo ziqhutywa ngokuchanekileyo kwiWindows 8, ngamanye amaxesha kufuneka unyanzele usetyenziso lwe-PC ukuze isebenze.
Nje ukuba iserver isebenze kuya kufuneka ube nayo I-PC kunye ne-iPhone kwi-WiFi efanayo kwaye ulandele imiyalelo eneenkcukacha kule vidiyo ilandelayo.
Ukujonga umzimba. Ukufikelela kumbono womzimba kwimowudi yamathambo
Ukujonga umbala. Ukufikelela kwimifanekiso yedatha yemibala (ine-latency).
Ukujongwa kobunzulu. Ukufikelela kwidatha yomfanekiso ongasemva (une-latency).
Ukujonga infrared. Ukufikelela kwidatha yomfanekiso we-infrared (ine-latency).
Uvavanyo lweMotion. Slayida isandla sakho kwaye ujikeleze ityhubhu ukwenza uvavanyo lokuhamba.
Uvavanyo lweVR. Ikuvumela ukuba ube namava okwenyani nge-iPhone yentloko.
Ukuba unamathandabuzo okanye ufuna inkxaso, umphuhlisi unikezela ngeyakhe iwebhusayithi yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » I-Kinect v2 Viewer ikuvumela ukuba usebenzise iMicrosoft Kinect nge-iPhone
Ukuqhwanyaza ikhibhodi ekuvumela ukuba ukhethe ngakumbi ngokhiye ngamnye